मृ’त्यु भएका भुपेन्द्रको बारेमा प्रहरीले नै सार्वजनिक गर्यो उनको ग्रुपको भ’ण्डाफो’र ! खुल्यो यस्तो रहस्य – Online Khabar 24
मृ’त्यु भएका भुपेन्द्रको बारेमा प्रहरीले नै सार्वजनिक गर्यो उनको ग्रुपको भ’ण्डाफो’र ! खुल्यो यस्तो रहस्य
मोहन जोशी/न्युज कारखाना धनगढी : मंगलबार राति कैलालीको टिकापुरमा ‘ग्या’ङ’ फा’इ’ट हुँदा लम्किचुहा नगरपालिका–१ का भूपेन्द्र बडूवालको ह’ ‘त्या भयो । ह’ ‘त्या गरिएका बरुवाल लम्कीस्थित युवा ग्या’ङका नाइके रहेका थिए ।
कैलालीको लम्की नगरपालिकामै पर्ने चिसापानी क्षत्रेका युवा र लम्की क्षेत्रका युवाबीच लामो समयदेखि सा’मू’हि’क कु’टा’कु’ट हुने गरेको थियो । मंगलबार पनि दुई स’मूहबी’च जम्काभेट हुँदा लम्की क्षत्रका युवाको नेतृत्व गर्ने बडूवालले ज्या’न गु’मा’एका छन् भने चिसापानी क्षेत्रका युवाको नेतृत्व गर्ने नवीन रावल फ’रार छन् ।
इलाका प्रहरी कार्यालय कैलालीका अनुसार चिसापानी र लम्कीका दुई स’मूहबीच विगतदेखि नै रिसिवी रहेको थियो ।
‘मृतक बरुवाल र फ’रार रहेका नवीन रावल दुवै जना ‘ग्या’ङ’ बनाएर ल’डा’ई गर्दै आएका थिए,’ इलाका प्रहरी कार्यालय टिकापुरका इन्चार्ज प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रकाश सापकोटाले भने,‘मंगलबार पनि दुई स’मूहबी’च ‘ग्या’ङ’ फा’इ’ट नै भएको हो । एउटा स’मूहका नाइके मा’रि’ए । अर्को समूहका नाइके फ’रा’र रहेका छन् ।’
दुई समूहबीच योजनाबद्ध तरिकाले मु’ठभे’ड भएको प्रहरीले जनाएको छ । ‘यो मु’ठभे’ड अचानक भएको होइन,’ प्रहरी नायव उपरीक्षक सापकोटाले भने,‘यो’जनाब’द्ध तरिकाले भएको मु’ठभे’ड हो । त्यसैले ह’ति’या’रस’हित युवाहरू टिकापुर पुगेका थिए ।’ घटनामा सं’ल’ग्न नवीन रावल समूहका पाँच जनालाई प्रहरीले नि’यन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, नवीन रावल भने फ’रार रहेका छन् ।
उनको खोजीकार्य भइरहेको प्रहरीले जनाइएको छ । घटनापछि सुरक्षा खतरालाई मध्यनजर गर्दै प्रहरीले नवीन रावलका आमा बुबा र भाइलाई सुरक्षा घेरामा राखेको छ । उनीहरू चिसापानीस्थित संगम होटेल सञ्चालन गर्दै आएका थिए । मृतकका आफन्तले जाहेरी दिएपछि घटनाको थप अनुसन्धान हुने इलाका प्रहरी कार्यालय टिकापुरका इन्चार्ज सापकोटाले बताए । यस घट नाको यस अघिको रिपाेर्ट यस्तो थियो, कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका-१ का २२ वर्षीय भूपेन्द्र बडुवाल अमेरिका जाने तयारीमा थिए। डिभी परेपछि उनी अमेरिका जाने चाँजोपाँजो मिलाउँदै थिए।
काठमाडौंमा बहिनीसँग बसिरहेका बडुवाल दसैंमा घर गएका थिए। उनी काठमाडौंमा ब्याचलर्स पढिरहेका थिए।
उनकी छिमेकी तथा लम्कीचुहा नगरपालिकाकी उपमेयर टीका थापाका अनुसार दसैंमा घर आएपछि अमेरिका जाने तयारी थालेका बडुवाल काठमाडौं फर्केका थिएनन्।उनकी बहिनी भने दसैं मनाएर काठमाडौं गइसकेकी थिइन्। परिवारमा उनीहरू दुई छोराछोरी मात्रै हुन्।
मंगलबार राति ८ बजे खाना खाएर बसिरहेका बडुवाललाई बोलाउन उनका साथी कपिल श्रेष्ठ आएका थिए।‘साथीलाई अप्ठे’रो परेको छ भन्दै उनले राति ८ बजे घरबाट लिएर गएका थिए,’ थापाले सेतोपाटीसँग भनिन्।लम्कीचुहा-१ कै श्रेष्ठ बडुवालका नजिकका साथी थिए। उनी पनि काठमाडौं नै बस्थे। श्रेष्ठ मंगलबारमात्रै कैलाली पुगेका थिए।
‘लगेर केहीबेरमै मा’रिहा’ल्नुपर्ने त्यस्तो ठूलो कही दु’श्म’नी थियो भन्ने मलाई लाग्दैन,’ थापाले भनिन्।बडुवाल इमान्दार स्वभावका थिए। घर गइकन बुवा डम्बरलाई पसलमा सहयोग गरिरहेका थिए।लम्कीचुहामा डम्बरको जुत्ता-चप्पल र इनामेलको पसल छ।
‘उनीहरू साधारण परिवारका थिए, बुवाआमा यता व्यापार गर्थे, छोराछोरी काठमाडौं पढ्थे,’ थापाले भनिन्।बडुवाललाई सुरूमा टीकापुर स्थित केराबारीमा पुर्‍याएका थिए। त्यहाँबाट ल’खे’ट्दै लखे’ट्दै होटल सिद्धार्थ नजिक पुर्‍याएर ह’ ‘त्या गरेको पाइएको थापाले बताइन्। ‘परिवार वि’क्षि ‘प्त अ’वस्था’मा छ, उनीहरूसँग केही कुराकानी गर्ने परिस्थिति छैन,’ उनले भनिन्।
बडुवाललाई खु’कु’री र टाउ’कोमा र’ प्र’हा ‘र गरेको देखिएको कैलालीका प्र’हरी उपरीक्षक विश्व अधिकारीले बताए।अधिकारीका अनुसार शं’का’स्प’दहरू प्रहरीको नि’गरा’नीमा छन्। कपिल पनि प्रह’रीको नि’ग’रानीमा छन्।
शं’का’द आठ जनालाई प’क्रा’उ गरिसकिएको अधिकारीले बताए। ‘उनीहरू कोही टीकापुर, कोही लम्कीमा छन्, एकठाउँमा ल्याएर घ’टनामा सं’लग्न’ता पुष्ट्या’इँ गर्ने काम भइरहेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘अनुस’न्धानको क्रम’मा रहेकाले नाम उल्लेख गर्न मिलेन।’
ह’ ‘त्यामा प्रयोग भएको खु’कु’री बरा’मद गरिएको छ। घ’टनास्थल नजि’कै पे’ट्रोल प’म्पको छेउमा खु’कु’री फे’ला परेको अधिकारीले बताए। ह’त्याको बि’रो’धमा ल’म्कीका स्थानीयले टायर बालेर पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अ’वरू’द्ध पार्दै प्रद’र्शन गरिरहेका छन्। प्रह’रीले राजमार्ग खुलाउन प्रया’स भइरहेको छ। यो खबर सेतोपाटी डटकममा छ ।
Prevडिभी परेपछि अमेरिका जाने तयारीमा थिए भूपेन्द्र तर यसरी मा’रि’ए !
nextश्रीमानले २ महिनाको बिरामी छोरो मा’र्न खोजेका थिए,अहिले छोरोको उपचार हुंदैछ (भिडियो हेर्नुस्)